Christianity in Zimbabwe. Christian organisations, ministries, churches in Zimbabwe, and religious denominations. Online portal for Zimbabwe
† Christianity in Zimbabwe: Christian Ministries and Churches
Zimbabwe is a Christian nation with over 90 percent of the population believing in the Christian faith.
This section serves to honor Zimbabwe’s Christian identity. Below are Christian ministries and churches in Zimbabwe or led by Zimbabweans.
1. Christian Ministries in Zimbabwe & our Partner Ministries:
* Jesus Work Ministry (at JesusWork.com)
* Spiritual Warfare (at ChristianWarfare.com)
* Deliverance Ministry (at DeliveranceMinistryBooks.com)
* Fountain of Life Ministries (at afountainoflife.org)
Please contact us at Zimbabwe.cc to submit your Zimbabwean related ministry website, church website of a church you attend, or Christian charity.
2. Christian Online Resources:
* Free Audio Sermons (at ChristianAudioSermons.com)
* Free Online Bibles in English and Other Languages
* Prayer & Fasting Keys (at AllFasting.com)
* Breaking Curses (at BreakingCurses.com)
* Breaking Generational Curses (at BreakingGenerationalCurses.com)
* Christian Equality -Gender, Race, etc (at ChristianEquality.com)
* Christian Women's Rights (at WomensRightsWorld.com/Christianity)